Luke Bracey – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
G.I. Joe: Retaliation (2013) Unicode G.I Joe အဖှဲ့ကွီးက သမ်မတကွီးထောကျခံအားပေးတဲ့ လြှို့ဝှကျအဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈပွီးတော့ နြူကလီးယားစဈဆငျရေးတဈခုအပွီးအပွနျမှာ G.I Joe အဖှဲ့ဝငျတှရှေောငျတခငျတိုကျခိုကျခံ ရပါတယျ။ဒါ့အပွငျသမ်မတကွီးကလညျး G.I Joe အဖှဲ့ဝငျတှသေဆေုံးပွီဟုယူဆပွီးတော့ G.I Joe အဖှဲ့ကိုဖကျြသိမျးလိုကျပါတယျ။ဒါပမေယျ့ စဈဆငျရေးထဲမှာ အသကျရှငျကနျြရဈ နတေဲ့ Roadblock, Lady Jaye, Snake Eye, Flint တို့က ဒီလိုအဖွဈအပကျြကိုစပွီးတော့ စုံစမျးပါတော့တယျ။ တဈဖကျမှာလညျး Cobra commander ကိုဖမျးစီးထားတဲ့အကဉျြးထောငျ ကိုဖောကျပွီးတော့ Cobra commander ကိုချေါထုတျသှားခဲ့ပါတယျ။ Joe ရဲ့လကျကနျြအဖှဲ့ တှေ ဘယျလိုမြိုးဖွရှေငျးမယျဆိုတာကိုတော့ … ဇာတျလမျးထဲမှာဘဲဆကျလကျအားပေးကွပါ Credit Review Zawgyi G.I Joe အဖွဲ့ကြီးက သမ္မတကြီးထောက်ခံအားပေးတဲ့ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ နျူကလီးယားစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအပြီးအပြန်မှာ G.I Joe အဖွဲ့ဝင်တွေရှောင်တခင်တိုက်ခိုက်ခံ ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်သမ္မတကြီးကလည်း G.I Joe အဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးပြီဟုယူဆပြီးတော့ G.I Joe အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် စစ်ဆင်ရေးထဲမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ် နေတဲ့ Roadblock, Lady Jaye, Snake Eye, Flint တို့က ဒီလိုအဖြစ်အပျက်ကိုစပြီးတော့ စုံစမ်းပါတော့တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း Cobra ...
IMDB: 5.8/10 167991 votes
Danger Close (2019) Unicode စဈအငျအား၊လကျနကျအငျအား အဘကျဘကျက သာလှနျနတေဲ့ သူတှကေို ဗီယကျနမျတှဟော လုံးဝမကွောကျရှံခဲ့ဘူး….ဘယျသူမှမယှဉျနိုငျတဲ့ပွောကျကြားစဈဗြူဟာ ပွနျလညျတုံပွနျခမြှေုနျးခဲ့တာ အားလုံးလညျးသိပွီးဖွဈမှာပါ…. အခုလညျး Australian နဲ့ New Zealand တပျတှရေဲ့ ကွီးမားတဲ့စဈအခွစေိုကျစခနျးကို ဗီယကျနမျတှကေ တညျနရောအတိအကရြယူပွီး လကျနကျကွီးတှနေဲ့ ဗုံးသီးမိုးရှာခဲ့တယျ… အကအြဆုံးမြားခဲ့သလို New Zealand တှအေတှကျလညျး အခဲမကခြေဲ့ဘူး… ဒါကွောငျ့ တနျပွနျတိုကျစဈဆငျဖို့ ရနျသူ့တညျနရောကို အမွနျဆုံးရှာဖှပွေီး လိုကျလံသုတျသငျဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ…. အဲ့ဒီမှာ ပွောကျကြားစဈပိုငျတဲ့ ဗီယကျနမျတို့အကွိုကျဖွဈသှားတော့တယျ…. သူတို့ ဘယျလို တနျပွနျတိုကျစဈဆငျကွမလဲ… ပဈကူတှဘေယျလိုယူလဲ… ဗီယကျနမျတှရေော ဘယျလို ပွောကျကြားစဈဆငျနှဲမလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး…IMDb…7.4 တောငျရရှိထားပါတယျ… ဒီ စဈကားက စစခငျြးကို တအုနျးအုနျးနဲ့ဗငျြးကွတာပါ…အီနတောကိုမရှိသလောကျပါပဲ…. စဈကားကွိုကျသူတို့အဖို့တော့ လကျမလှတျသငျ့ပါကွောငျး သတငျးကောငျးပါးအပျပါတယျ Credit Review ဒီကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Htet Thuya Aung ဖွဈပါတယျ Zawgyi စစ်အင်အား၊လက်နက်အင်အား အဘက်ဘက်က သာလွန်နေတဲ့ သူတွေကို ဗီယက်နမ်တွေဟာ လုံးဝမကြောက်ရွှံခဲ့ဘူး….ဘယ်သူမှမယှဉ်နိုင်တဲ့ပြောက်ကျားစစ်ဗျူဟာ ပြန်လည်တုံပြန်ချေမှုန်းခဲ့တာ အားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ…. အခုလည်း ...
Hacksaw Ridge (2016) အော်စကာ ဆန်ကာတင် ၆ ဆု၊ အခြားဆန်ကာတင်ဆုပေါင်း ၆၉ ဆုမှာ ၃၅ ဆုအထိရရှိခဲ့တဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးစစ်ကားအသစ်တစ်ကားပါ။ Saving Private Ryan, We are soldiers ကားတွေကို အမှီလိုက်နိုင်တဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ။ ပြီးတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကရဲ့ အမြင့်ဆုံး သူရဘွဲ့တံဆိပ် Medal Of Honor ကို စစ်မြေပြင်မှာ ကျည်ဆံတစ်တောင့်မပစ်ဘဲ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆေးတပ်သား တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ အရင်က အန်ဒရူးဂါဖီးကို မြင်ရင် SpiderMan လို့စိတ်ထဲမှာ တန်းပေါ်ပေမယ့် ဒီကားအပြီးမှာတော့ အန်ဒရုးကိုဘယ်မှတွေ့တွေ့ တပ်သားဒက်စ်မွန် ဒေါ့စ်အဖြစ်ပဲ မြင်နေတော့မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုအရ သေနတ်လုံးဝမကိုင် လူမသတ်ဘဲ စစ်ပွဲထဲမှာ နိုင်ငံအတွက် တာဝန်ထမ်းမယ်ဆိုပြီး ခေါင်းမာမာနဲ့ ခုံရုံးအတင်ခံ ထောင်ကျမလိုအဖြစ်ခံပြီး လိုက်ခဲ့တဲ့ လူဗလံလေးတစ်ယောက်၊ စစ်ပွဲဆိုတာ လူသတ်ဖို့တင်မဟုတ်ဘူး လူကယ်ဖို့လည်း ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ...
IMDB: 8.1/10 367,636 votes